Azoko atao ve ny mampiasa ny lisitry ny rohy rehetra ao amin'ny tranonkalan'ny mpifaninana?
Eny, azo atao ny mandray soa avy amin'ny fichier ao amin'ny lisitry ny tranonkala (profil) momba ny mpivarotra ao aminao. Raha vonona sy vonona ny hahazo rohy bebe kokoa amin'ny blôginao ianao na ny tranokala fandraharahàna, dia tsidiho azafady mba hanaraka torolalana fohy etsy ambany. Eny e, alohan'ny hanombohantsika, dia avelao aho hampiseho anao vitsivitsy amin'ireo fitaovana fikarohana tiako indrindra hijerena ny mpifaninana aminao. Diniho ny fampiasana azy ireny mba hahitana ny lisitra rehetra ao amin'ny lisitry ny tranonkala ho an'ny pejy Internet rehetra hita ao amin'ny Internet.
Indreto ny lohako ireo mpanampy an-tserasera izay ampiasaiko amin'ny fikarohana fikarohana momba ny tranokalan'ny tranokalako, ary ny roa amin'ireo mpanohitra mahomby kokoa ahy:
Ny fitaovana avy amin'ity lisitra ity dia manana fampiharana ampiasaina ampiasaina amin'ny sehatra samihafa amin'ny sehatry ny tranonkala iombonana, fikarohana fikarohana sy fanadihadiana. Mazava ho azy, samy manana ny lafiny matanjaka indrindra izy ireo, ny andraikitra manokana, ny fahafahana manokana, ary ny teboka somary, ary ny fomba fampiasa manokana. Samy manana dikan-dikan-teny maimaim-poana koa izy ireo amin'ny fidirana malalaka malalaka. Ary izy ireo dia samy mahazatra loatra, farafaharatsiny amin'ny fanamarinana ny lisitry ny backlink ao amin'ny lisitry ny tranonkala, ary koa ny fanomezana fomba fijery mahomby.
Rehefa vita tsara dia lasa tsotra ny zava-drehetra - rehefa fantatrao ireo hetsika sy tanjon'ireo mpifaninana akaiky anao, dia azonao atao ny mamolavola tetik'ady hentitra mba hijanona sy hitarika amin'ny blôginao na tranokala anao. Ireto ambany ireto ny drafitra an-tsehatra azo ampiharina ho an'ny lion-n'ireo fitaovana maoderina fanodikana maoderina, ankoatra ireo voatanisa teo aloha. Ataovy azo antoka fa hanaraka ireo dingana tsotra ireo. Halalino ny lisitra rehetra ao amin'ny tranonkalan'ny mpanohitra anao noho ny tombony azonao.
Fanadihadiana Backlink Fifaninanana
Tsindrio ny bokotra fandikana ny hidiran'ny tranonkalan'ny tranonkala izay tianao hijerena. Afaka miala amin'ny fikarohana ianao na ny tranonkala hafa izay mila fikarohana momba ny fikarohana momba ny fikarohana. Raha ny amiko, izaho dia nanokatra ny tranonkalan'ny mpifaninana ao anaty varavarankely iray manokana mba hananana ny kopia URL rehetra izay tsy misy diso.
Ny sehatra serivisy rehetra ho an'ny fiarahamonina dia hampiseho anao ny fichier rehetra izay manondro ny tranokala na ny blôgy izay nokarohanao. Amin'izany fomba izany, afaka mandefa ny rakitra rehetra miaraka amin'ny lohatenin'ny pejy an-tsipiriany ianao ary ny URL-n'ny pejy mifandraika amin'ny tabilao tokana mba hahatonga ireo zavatra mora. Mazava ho azy, misy safidy samihafa amin'ny fanamafisana ny fikarohana rehetra niorina - ny fitaovana rehetra dia hanolotra anao hanondrana izany any amin'ny. csv rakitra, standard Excel scoreboard, na a. txt. Vao avy manapa-kevitra ianao.
Raha vao mahita sarimihetsika manontolo momba ny rohin'ny tranonkala ianao, dia mety ho efa fantatrao na tsia ny fihetsika manaraka anao amin'ny ambaratonga. Mariho anefa, fa ny sasany amin'ireo mpifaninana ao amin'ny niche dia afaka manana mora fonosana goavily goavana tonga ohatra amin'ny rohy an'arivony an'arivony. Izany no antony tokony hitandremanao rehefa manangom-bokatra toy ny habakabaka toy izany - fotsiny dia manam-paharetana sy maharitra hizaha ny vokatrao marina.
Noho izany, izany no fomba tsara ahafahana manadihady valiny mahomby mba hahazoana tombony amin'ny fitadiavana tsara indrindra amin'ireo mpifaninana tsara indrindra anao. Mariho anefa fa misy karazana backlinks samihafa. Mba hahazoana antoka fa tsy nanadino azy ireo ianao, hevero ireto safidy fanoratana manaraka ireto: rohy mifandray aminy, rohy sary, rindrina ary rohy Source . Mirary anao ho tsara vintana!